Raadinta Google Console Goofed Oo Loo Diray Digniin Been ah WordPress | Martech Zone
Axad, Febraayo 12, 2017 Isniin, February 13, 2017 Douglas Karr
Mararka qaarkood waxaan xoqaa madaxayga halka saxda ah ee Google ay ku socoto raadinta qalabka. In kasta oo aan aaminsanahay inay tahay adeeg la yaab leh in lagu ogaado khayaanada ku jirta boggaga oo laga hortago in goobahaas lagu qoro natiijooyinka raadinta, haddana ma hubo inaan rabo Google runti inay baarto goobaha raadinaya arrimo.
Xaaladda marka la eego waxay ahayd digniin dhicis ah oo aniga igu soo baxday oo, waxaan qiyaasayaa, tobanaan kun oo bogag ah oo sheegay inay wadaan nooc WordPress ah oo aan ammaan ahayn. Dhibaatada? Waxay ahayd wax been abuur ah oo aqlabiyad badan oo ka mid ah bogagga ayaa dhab ahaantii waday nooca ugu dambeeyay ee WordPress. In kasta oo aanan aqoon u lahayn habka ay Google u adeegsanayso inay ku ansaxiso boggaga, waxay umuuqataa in qafisnimadu ay ahayd arrin. Maadaama bogagga keydku ay caan ku yihiin internetka oo dhan iyo bogagga WordPress, waxay dhalisay buuq xoog leh.
Dhibaatadu, dabcan, waxay ahayd in badan oo ka mid ah dadka emaylladaas helay waxay ahaayeen macaamiil bixiya martigelinta horumarsan iyo amniga, sidoo kale waxay leeyihiin hay'ad, sida dhali, Ka shaqeynta sidii loo hubin lahaa in macaamiisheenu ay nabad qabaan. Markii ay helaan iimayl sidan oo kale ah, waxay u egtahay inay sababi karto carqalad. Mahadsanid, Google isla markiiba way ka jawaabtay golayaasha ay maamulaan in iyagu, runtii, ay keeneen arrinta.
Dhamaan waad salaaman tihiin - anigoo ku hadlaya magaca kooxaha wada dadaalkaan, fadlan aqbal raali galinta aan ka bixinno jahwareerka aan abuurnay. Waan ognahay kiisaska aan fariimaha ugu dirnay milkiilayaasha dhacdooyinka WordPress ee loo casriyeeyay nuqulkii ugu dambeeyay tan iyo guurguuradeennii ugu dambeysay - waxaan ka shakinnay inay jiri doonaan tiro ka mid ah kiisaskan ka hor inta aanan billaabin dadaallada farriinta. Juan Felipe Rincón, Google
The mea culpa waa la qiimeeyay, laakiin wali, waxay umuuqataa wax yaab leh in Google kaliya ay bilaabi doonto wax sidan oo kale ah kaligood. Dhowr mawduuc markii dambe ee wadahadalka, maareeyaha alaabada amniga WordPress oo kuxiran kooxda Google wuxuu sheegay inay jeclaan lahaayeen inay kawada shaqeeyaan tan. Ma hubo sababta aysan taasi u dhicin marka horeba, laakiin waa ku mahadsantahay wanaagga inuu u socdo jihadaas.
In kasta oo aanan shaki ka qabin in Google ay leedahay ilaha lagu fuliyo shaqadan oo kale, runtii ma hubo inaan ku qanacsanahay halka ay shirkaddu ku sii socoto. Waan jeclahay xaqiiqda ah in Google ay bixiso qalab sida Raadinta Console, Falanqaynta, Maareeyaha Tag, iyo kuwa kale si ay nooga caawiyaan hagaajinta sida isticmaaleyaashu ula falgalaan barahayada. Laakiin markay dhab ahaantii ka gudbaan khadka - sida kiiskan oo kale iyo AMP, SSL, Mobile, iyo dadaallada kale, waxay umuuqataa inay ku sii socdaan cagaha lugaha.
Samaynta talooyinka waa hagaagsan tahay, iyo bixinta qalabka lagu bixinayo talooyinkaas ayaa xitaa ka sii fiican. Laakiin marka Google uu bilaabo digniinta ama xitaa ciqaabida boggaga aan u dhaqmin sida Google u doonayo iyaga waxay umuuqataa xoogaa xad dhaaf ah aniga.
Tags: raadinta google googlegoogle webmastersJuan Felipe RincónWordPressamniga wordpress
Tirakoobka Suuq-geynta Warbaahinta Bulsho Ma Weyn Doontid!
Febraayo 13, 2017 saacadu markay tahay 9: 59 AM
Google waa sida Waaxda Waxbarashada. Haddii dugsiyadu ay rabaan doolarka federaalka waa inay raacaan heerar gaar ah oo laga yaabo ama aan ku habboonayn danaha bulshada ugu wanaagsan. Haddii aad rabto faa iidada ka soo baxda natiijooyinka raadinta waa inaad raacdaa xeerarka Google xitaa haddii aysan ku habboonayn danahaaga ugu fiican. Waxaan u maleynayaa kala duwanaanta matoorada raadinta inay tahay mid qasab ah sidaa darteed ma hayno hal shirkad oo mammoth ah oo dadka ku dhibaateeya soo gudbinta. Google waxay qabataa waxyaabo badan oo waawayn oo waxtar u leh bulshada tiknoolajiyada laakiin sidoo kale waxay ku shaqeynayaan dantooda gaarka ah markasta.
Febraayo 17, 2017 saacadu markay tahay 8: 53 AM
Ma garanayo… Waxaan helay ogeysiiska sida qaar ka mid ah macaamiishaydu heleen. Uma maleynayo inay tahay arrin. Hadday ku soo noqnoqotay iyo in ka badanba waxaan yara walaacsanahay Waxaan siinayaa iyaga baas kan.
Febraayo 17, 2017 saacadu markay tahay 9: 07 AM
Laga yaabee inaad leedahay macaamiil kafiican?